PhotoGIMP inosiya GIMP yako sekopi yeakakurumbira Adobe Photoshop | Linux Vakapindwa muropa
PhotoGIMP inosiya GIMP yako sekopi yeakakurumbira Adobe Photoshop
Photoshop ndiyo inonyanya kufarirwa kugadzira zvisikwa uye kugadzirisa kunyorera. Iwe unongofanirwa kuteerera / kuverenga mutauro unozivikanwa umo iwe unoti "chop" kugadzirisa foto. Asi, sezvamunoziva mese, kune zvekare zvakaenzana zvine simba uye zvemahara sarudzo seGIMP. Dambudziko guru ratinoona kana tichishandisa GIMP nderekuti, pamwe, isu takajairwa iyo Photoshop interface, ndosaka mod kana chigamba ichangoberekwa iyo yavakabhabhatidza se MufananidzoGIMP.
Sezvatinoverenga mune yayo peji yepamutemo paGitHub, PhotoGIMP iri nyore chigamba cheGIMP 2.10+ izvo ndizvo yakagadzirirwa kuita kuti zvinhu zvive nyore kune vashandisi ve Photoshop. Mukupfupisa, sezvaungaona mumusoro wemusoro, kana waiswa tichaona kuti yedu GIMP yasvika pakuve neinongedzo yakada kuteverwa kune iyo yePhotohop, kunyangwe ichifanirawo kuzivikanwa kuti yazvino mavhezheni eGIMP vatora nhanho kuenda kumberi mupfungwa iyi.
1 PhotoGIMP chigamba kubatsira vashandisi vePhotohop
2 Maitiro ekuisa
PhotoGIMP chigamba kubatsira vashandisi vePhotohop
Zvinoitwa nechigamba ichi zvinotevera:
Sangano rezvishandiso kutevedzera chinzvimbo cheAdobe Photoshop.
Mazana emafonti matsva.
Nyowani Python mafirita akaisirwa nekusarudzika, senge "curate sarudzo".
Mutsva wekugamuchira skrini.
Nyowani default marongero ekuwedzera nzvimbo pane canvas.
Mapfupi akagadzirirwa zvimwe zvakafanana muPhotohop, ichitevera Adobe Gwaro.
Icon nyowani uye zita retsika .desktop faira ..
Mutauro mutsva uyu chiRungu (kunyangwe uchigona kuchinjwa kubva pane zvaunofarira).
Dambudziko nderekuti kuisirwa chigamba ichi hakusi iko kuri nyore pasi rose. Vagadziri vayo vanokurudzira kuti inoitirwa iyo Flatpak package, asi kuti iwo "mafaera chete" ayo anogona kushandiswa mune chero vhezheni yeGIMP, iyo inosanganisira iyo DEB package, iyo RPM, iyo Snap uye AppImage shanduro kana iyo Windows uye macOS shanduro .. Kune aya mapakeji, iwo chete mirairo yatinayo ndeye «ingo tarisa iko kweiyo maGIMP mafaera pane yega system / package«. Kune iyo Flatpak vhezheni, iwe unofanirwa kuita zvinotevera:
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuve neiyo Flatpak vhezheni yeGIMP yakaiswa. Tinogona kuitsvaga mune yedu software centre kana kupinda Iyi link.
Mukati meZIP yatakatora pasi kubva Iyi link kune matatu akavanzika maforodha, ayo muLinux anoreva kuti vane nguva pamberi pavo uye anogona kuratidzwa nekiyi yekhibhodi, kana zvakadaro zvinowanzoitika. Aya mafolda matatu anofanirwa kuburitswa mune yedu yega folda (/ imba / mushandisi).
Kana iwo mamwe mafaera atovepo, tinoanyora. Ndokunge, mukufunga, zvese.
Iyo faira inotorwa padanho rekutanga ine madhairekitori .icons, ine iyo PhotoGIMP icon, .local, iyo ine tsika .desktop faira, uye .var, iyo ine iyo flatpak chigamba nemaitiro eGIMP 2.10+. Kana isu tichida kuti GIMP ichengete icon yayo, isu tinongofanirwa kubvisa iyo .var faira kudhairekitori repamba.
Ini pachangu, ndakabvisa Photoshop kare kare uye ndajaira GIMP, chimwe chinhu chakabatsira kuti chimire kuzviratidza mumahwindo matatu akasiyana uye yekupedzisira sarudzo dzakatomisirwa dzinotibvumidza kuve nepaneru yekuruboshwe yakarongeka. Asi zvirokwazvo PhotoGIMP yakanaka sarudzo kune vazhinji vashandisi. Uri mumwe wavo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » PhotoGIMP inosiya GIMP yako sekopi yeakakurumbira Adobe Photoshop
Kufa kwemahara uye yakavhurika sosi software. Nhema kana chokwadi?
Flatpak 1.8 inosvika iine matsva ekugadzirisa uye ekuchengetedza matanho